ukuvavanya ukuhlola kwi-agile
Eyona Agile Uvavanyo lokuHlola kwi-Agile
Uvavanyo lokuHlola kwi-Agile
Uvavanyo lokuHlola ngumsebenzi obalulekileyo kwimeko ye-agile njengoko inokunceda abavavanyi besoftware ukuba bahambisane nesantya sophuhliso olukhawulezayo lweeprojekthi zesoftware.
Okokuqala, isingeniso esifutshane sendlela ye-agile kunye novavanyo lokuhlola:
Kwindlela yokusebenza ye-agile, isoftware ikhutshwa ngeendlela ezincinci. Iteration nganye ihamba ngokucwangcisa, ukuqikelela, ukukhula, ukudityaniswa, ukuvavanywa kunye nokukhululwa. Ngenxa yokukhutshwa rhoqo, uvavanyo oluzenzekelayo lubaluleke kakhulu njengoko abaphuhlisi kufuneka bafumane ingxelo ekhawulezileyo kwimeko yesicelo. Ukutshekishwa okuzenzekelayo kusebenza njengovavanyo lokuhlengahlengisa ukuqinisekisa ukuba kukhululo ngalunye isoftware ayiphindanga yabuya.
Uvavanyo lokuHlola luchazwa njengokufunda ngaxeshanye, uyilo lovavanyo kunye nokwenza uvavanyo. Yindlela yokuvavanya ukuxabisa umvavanyi njengenxalenye yenkqubo yovavanyo kunye nokwabelana ngamaxabiso afanayo ne-Agile Manifesto:
Abantu kunye nonxibelelwano ngaphezulu kweenkqubo kunye nezixhobo
Ukusebenza kwesoftware ngaphezulu kwamaxwebhu abanzi
Ukusebenzisana kwabathengi ngaphezulu kothethathethwano lwesivumelwano
Ukuphendula kutshintsho ngaphezulu kokulandela isicwangciso
Uvavanyo lokuHlola lukwancedisa kuvavanyo lokuzenzekelayo; Ngelo xesha uhlolo oluzenzekelayo lujonga imiba yokuhlehla, ukuvavanywa koPhononongo kugxile kumanqaku amatsha aphuhlisiweyo. Oku kubalulekile kuba i-sprint nganye ihlala ihlala kuphela iiveki ezimbalwa, ezingavumeli ixesha elaneleyo lokuvavanya iimeko zovavanyo kunye nokuzisebenzisa kamva ngokuchasene nesicelo. Kwelinye icala, kuvavanyo lokuhlola kwindawo ye-agile kuvumela abavavanyi ukuba baziqhelanise ne-domain kunye nokusetyenziswa kunye nakwindlela nganye, ukuba ukuqonda kuyaphuculwa kwaye kungoko abavavanyi besebenza ngakumbi.
Ngoku ka Uvavanyo lukaBrian Marick lwesine , kukho amacala amabini kuvavanyo, lawo axhasa inkqubo, okt ikhowudi yokubhala yenkxaso (iimvavanyo zecandelo) okanye unike isalathiso sokuba umdwelisi angagqitywa nini (iimvavanyo zokwamkela) kunye nezo zigxeka imveliso, okt “jonga kugqityiwe imveliso ngenjongo yokufumanisa ukusilela. ” Kulapha, kwindawo yokugxeka imveliso, apho uvavanyo lokuhlola lunokudlala indima enkulu kwiprojekthi ye-agile.
Kwiiprojekthi ezi-agile, iimvavanyo ezixhasa inkqubo zenziwa ikakhulu ngabaphuhlisi kwaye zihlala zenzekelayo kwaye luphawu lwenziwe ngokwembono yenkqubo, ngelixa iimvavanyo zokuhlola zijolise ekufumaneni imiba enokwenzeka engaphaya kovavanyo lwenkqubo ezenzekelayo. Abavavanyi bokuvavanya bajolise kwiindawo apho iimvavanyo ezikhoyo ezizenzekelayo zinokuvela zifutshane.
Abavavanyi abasebenza ngokusebenzayo abasebenza kwiiprojekthi ze-agile basebenzise amaqhinga okuvavanya ukunceda ukwazisa iqela leprojekthi malunga nemicimbi enokubakho kwimveliso. Uvavanyo lwabo alunakuba lolungacwangciswanga kwaye lube yi-freestyle okanye lulawulwe kusetyenziswa iitshathi kunye neeseshoni zovavanyo. Kananjalo ngenxa yamathuba amafutshane ophuhliso, ukuvavanywa kwendalo kuba semngciphekweni, kunye nokuvavanywa kokuhlola kunokujolisa kwiindawo ezinobungozi obuphezulu ukufumana iingxaki ezinokubakho.
Iindlela ze-Agile kunye novavanyo lokuhlola ziindlela ezincomekayo ezinokuthi, xa ziqeshwe kunye, zenze ulungelelwaniso oluhle kakhulu kumava ovavanyo.
Inqaku 4 v inqaku 5
Java fumana isikhombisi esisebenzayo ngoku
I-Skype isungula ukwabiwa kwescreen kwi-Android kunye ne-iOS, ukuyila kwakhona kweselfowuni
I-Apple Bukela i-SE vs Apple Watch Series 3
I-Samsung Galaxy Tab S 8.4 ihlaziywa kwi-Android 6.0.1
I-AT & T iza neefowuni zemiyalezo emi-4 kunye neenkonzo ezi-3 ezintsha
Uphengululo lwe-LG G Stylo
Konke okufuneka ukwazi malunga ne-Samsung kunye ne-apos; s I-Galaxy Tab ye-S8 5G yosapho kusenokwenzeka ukuba sele ivuza nje
Ngaba ubusazi- ukwenza ukuba iBluetooth isebenze kwimowudi engafumanekiyo ayikuthinteli ukufikelela kwi-smartphone yakho
Eyona miSebenzi ye-cyber elungileyo yangoMvulo
Eyona matyala e-wallet ye-Samsung Galaxy S7